Gabay Cusub DAWO IYO CUDUR, | Radio Muqdisho
Gabay Cusub DAWO IYO CUDUR,
Published on December 3, 2012 by admin · 9 Comments · 4,732 views
Waxaa tiriyay Abwaan Muxumed ‘Indhageelle’
Dhibaatada qabsatay ummaddeenna Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto waxaa u sabab ah dowlad la’aanta.
Xaqiiq ahaan, lama koobi karo dhibta aan ku gayoonnay dowlad la’aanta waxayse maansadu wax ka tilmaamaysaa:
Qayb tahriibta ku dhintay ama lagu la’ayahay.
Qayb tahriibtii iyagoo naf qaba ka gudbay ee gaaray waddamada shisheeye iyo sharaf darrida ku haysata.
Qayb waddankii joogta oo kari waayay inay qaxaan oo ay wareemeen dagaallo iyo wixi ka dhashay sida tacliil la’aan cudurro imw.
Intaa ka dib waxay maansadu ka hadlaysaa inaan dhibaatada fowdadu ku ekayn jiilka hadda noo laakin jiilasha dambe ay ugu gudbi doonto waayo ummad kasta dadkeeda wax barta waxay aqoontooda u gudbiyaan raca ku xiga.
Laakin nasiib –darrida nagu dhacday annaga kuweennii aqoonta lahaa way qaxeen, go’een ama howl-gabeen iyagoo aan badidood lagala harin aqoonti ay lahaayeen oo taxaniheennii nolosha oo dhan ayaa kala go’ ku dhacay waana taas sababta ay dhibaatadu ugu sii gudbayso faca dambe.
Aqoontu ma aha shahaaddo iwm oo qofku qaato balse ruuxa wax barta wuxuu u baahan inuu helo tababar ficil ah (Practical) isagoo ka hoos shaqaynaya ama kaaliye u ahaanaya ruuxii kale howshan uga horreeyay.
RIIX HALKAAN SI AAD U DHAGAYSATO GABAYGA DAWO IYO CUDUR
Waxaa kala go’ay oo aan la isu gudbin waayo-aragnimadii: Caafimaadka, Maamulka, Difaaca (Ciidamada) ,Wax –soo-saarka –Beeraha, badda, Macdanta, Xoolaha, Warshadaha imw-.
Xitaa fankeenni ma badbaadin oo dhallinyaro aan aqoon badan u lahayn ayaa faraha la galay oo qaawiyay.
Ugu dambayn waxay maansadu bulshada u ifinaysaa oo ku baraarujinaysaa in waxaaso dhan ay sabab u tahay dowlad la’aantu iyadoo sidoo kale uga digaysa ummadda in haddii aan dowladda la taageerin ay imaanayso dhibaato intan ka sii badan.
Cigaal says:	December 3, 2012 at 2:47 pm	Waaw, maashaa ALLAH.
Waa tix aad u qiimo badan. Dowlad la’aan dambe ALLE ayaan ka magan galaynaa.
Tilmaamaha uu ka bixiyay ciidankeenni ayaan la jiriiricooday.
Dabley madax iyo kornayllo
Baddiyo hawada iyo duurka
Daandaansi kolkuu yhimaado
Damaaciyo cadow dhulkeenna
Kolkii duullan la sheego
Difaac laga wada cabsoodo
Mid daran oo cidi ku dhiirran
Dejiya taatiik cajiiba
Feejigan duhur iyo habeen ba
Jayshkaa dunida ba ka sheeggan…..
Khayr ALLAH ha ku abaal mariyo abwaan Indha-geelle annagana kuwii waanadaa qaata ALLAH ha naga dhigo.
Reply »	Bandung says:	December 3, 2012 at 4:46 pm	Masha allah , waa gabay aad u fiican
Dowlad laa’n waa nolal xumo ,
We need Dowlad
Reply »	Shariif says:	December 3, 2012 at 4:46 pm	Hubaashii waa dhaxal-gal. waxaan Alle uga baryayaa abwaanka inuu xafido, cimrina siiyo si uu umadda wax badan ugu sheego.
Reply »	kaboptooy says:	December 3, 2012 at 5:36 pm	maasha alaahndhageele abwaan waa asiibtay kuwa gudbay oo jooga wadamada shisheeye waa ku bahdilan yihiin waase kabaxnay dowlad la aan dambe insha alaah nooloow ayaan ku lee nahay abwaan
Reply »	Abwaan geelle says:	December 3, 2012 at 6:43 pm	Maashaa allaah indha geelle, halkaas kawad, suugaanta ayaa loo adeegsadey duminta qarankeenii, haddana waa in dib loogu dhisaa
Reply »	Gallad Afrax says:	December 3, 2012 at 10:51 pm	Abwaanka waan bogaadinayaa. Waxaan qirayaa inaan weli leennahay abwaano heer Qaran ah. Maasha Allah….
Fadlan noo soo gudbiya gabayada noocan oo kale ah.
Reply »	Makaraan says:	December 4, 2012 at 3:39 pm	masha allah waa gabay aad u qiimo badan oo xikmada badan xambaarsan. abwaanka Alle ha dhowro
Reply »	Suuq bacaad says:	December 4, 2012 at 3:42 pm	waa gabay quseeya xaaladda dadka soomaaliyeed, waxaan rajeynaa in ay dad badan uu wacyi gelin u noqon doono. sii wad abwaanka suugaanta,
Reply »	Faadumo.karaani says:	December 15, 2012 at 1:17 pm	ala qeyr kuugu badalo waanada aad u soo jedisay umada soomaliyeed ayagana alaha ka dhigo kuwo qaato waana run oo qaar ayaaba la doofaar dhiqidii anagoo ilaah naga xaaraantimeeyay doofaarka iyo qamriga ilaahoow daljkeena nabad waarto nooga dhig aan ka baxnee qaboowgaan iyo qal qalka nagu haaysto qurbaha